WoW Guides dia tranokala AB Internet. Eto amin'ity tranonkala ity dia karakarainay ny fizarana ireo vaovao momba ny World of Warcraft, ireo fampianarana sy torolàlana feno indrindra ary hamakafaka ireo fanitarana lehibe indrindra amin'ity lalao video ity.
Hatramin'ny nanombohany, WoW Guides dia lasa iray amin'ireo tranonkala miresaka ao amin'ny sehatry ity lalao video malaza marobe ity.
Ny ekipa manoratra WoW Guides dia misy liana amin'ny tontolon'ny World of Warcraft, tompon'andraikitra amin'ny filazana ny vaovao rehetra momba an'ity MMORPG ity.
Raha te ho anisan'ny ekipa koa ianao dia afaka andefaso aminay ity takelaka ity mba ho tonga mpanonta.
Gamer Passionate izay efa nilalao WoW hatramin'ny 2004. Nanomboka tamin'ny voalohany dia tiako ny nihaona tamin'ireo mpilalao, niady tamin'ny ady, ary nanana traikefa vaovao sy nahafinaritra tamin'ny lalao.
Gamer World of Warcraft gamer. Mpampianatra tena izay manomboka hatrany amin'ny zava-baovao, indrindra raha toa ka misy ifandraisany amin'ny tontolon'ny WoW.
Mahafinaritra ahy ny lalao World of Warcraft sy ireo traikefa nahafinaritra tao aminy. Mahafinaritra ny mandany fotoana isan'andro hijerena ireo toerana isan-karazany izay itondran'ny endri-tsoratra WoW anao. Ka isaky ny mahita zava-baovao dia tiako ny mizara izany amin'ny hafa mba hahafahan'izy ireo mankafy.
Tena tiako ny mizara ny fahalalako momba ny WoW, lalao milalao andraikitra lehibe izay nandraisan-tsoa ny eritreritry ny mpamorona azy, namolavola tontolo tsy mampino hahafoy anao. Tiako ny lalao video, saingy tsy misy mihoatra ny World of Warcraft.